विदेश जानुपर्ने भएकाले रेडियो स्टेशन बिक्रीमा ! - Radio Audio
मैले जीवनको असाध्यै उर्बर समय रेडियोमा बिताएको छु । त्यसैले रेडियोको विकल्पमा मसँग केही पनि छैन । मैले केही गर्न जानेको छु, सिकेको छु र बुझेको छु भने रेडियो र रेडियोसँग जोडिएको कुराभन्दा केही पनि छैन, कोही पनि छैन । विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा कलम चलाउँदै गर्दा केही कुरा भन्न र लेख्न मन लाग्यो । म रेडियोकर्मी बन्छु भनेर रेडियोकर्मी बनेको होइन । रहरले भन्दा पनि बाँच्नका लागि करले काठामाडौं भित्रिएको थिएँ । बाँच्ने सिलसिला थियो । काठमाडौंमा जे काम पाइन्छ, त्यही काम गर्दै गएँ । कहिले महाबौद्धको औषधि पसलमा सेल्स ब्वाइ भएँ । कहिले बागबजारमा पत्रिका पसले भएँ । यही सिलसिलामा खै कसोकसो उछिट्टिएर म रेडियोसँग जोडिन पुगें । पहिले स्रोताका रुपमा, पछि पत्रकारका रुपमा । अनि अहिले साहुजीका रुपमा ।
गएको मंसिर २१ गतेपछि रेडियो अडियो १० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यहीबीचमा मैले रेडियोसँग जोडिएका कुराहरुलाई नजिकैबाट हेर्ने पाएँ । चिहाउन सकें । अनि खोतल्ने मौका पाएँ । रेडियोबाटै नाम पाएँ । काम पाएँ । दैनिक गुजारा चलाउने दाम पाएँ । सबै भन्दा ठूलो आत्मसन्तुष्टि पाएँ । जानेर नजानेर, थाहा पाएर नपाएर । रेडियोसँगै दिन बिताएका धेरै वर्षमा सुखमात्रै आएन, अप्ठेरा र असजिला दिनहरु पनि आए । तनावै तनावले रात बिते । कहिले मन हार्यो । कहिले सपना उड्यो । तर, रेडियोसँगको नाता टुटेन, जहाँ म अहिले रमाइएको छु । यो खुसीको कुनै पनि मूल्य छैन । तर, अबको यात्रा सजिलो पनि छैन ।
वाट र क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गर्दैमा अबको रेडियोको यात्रा सजिलो छैन । कुन डाँडामा रेडियोको टावर राख्ने ? कति अग्लो टावर राख्ने ? कहाँबाट लिंक गर्ने भनेर टावरको उचाइमा अल्झने समय पनि अब रेडियोका लागि शुभ छैन । रेडियोलाई हामीले अहिलेसम्म सूचना र मनोरञ्जनको चौतारी बनाएका छौं । कतै विकास र समावेशी आवाज भनेका छौं । कतै परिवर्तनको सम्वाहक भनेका छौं । कतै नेपालीको, कतै माटोको आवाज भनेका छौं । तर, आफै परिवर्तन हुन सकेका छैनौं । आफ्नै आवाज समेट्न सकेका छैनौं । आफ्नै बोलीलाई चम्किलो बनाउन सकेका छैनौं । हामी अरुका कुरामा रमाउँदा रमाउँदै स्खलित भैसकेका छौं ।
यति बेला प्रशारक र प्रशारण संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने बेला आएको छ । अब हामीले नसोचे कल्ले सोच्ने ? हामीले नगरे कसले थाल्ने ? घरैपिच्छे रेडियो खोल्ने कुरा ठूलो होइन सही सञ्चालन गर्नाले महत्व राख्छ । हैन, पशुपतिनाथले चलाएको यो देशमा अब पनि यस्तै अवस्थाले निरन्तरता पाइरहने हो भने छिट्टै आउँदै छ त्यो दिन । काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय दैनिकको वर्गीकृत विज्ञापनमा छापिनेछ, तुरुन्तै विदेश जानुपर्ने भएकाले चालु हालतमा रहेको रेडियो स्टेशन बिक्रीमा छ, पहिले आउनेलाई प्राथमिकता !
(लेखक रेडियो अडियोका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ)